शाही नातेदारको घरमा ओलीका मन्त्री र दूतावासका अधिकारीहरुको रहस्यमय जमघट ! – Sulsule
शाही नातेदारको घरमा ओलीका मन्त्री र दूतावासका अधिकारीहरुको रहस्यमय जमघट !
सुलसुले २०७७ साउन ३० गते ११:४६ मा प्रकाशित
प्रसिद्ध विक्रम राणको लाजिम्पाट स्थित निवासमा बिहीबार भारतीय दूतावासका अधिकारीहरु र दुई तिहाई बहुमत निकट (नेकपा)को केपी ओली नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्रीको ओली निकट एक राज्य मन्त्रीको रहस्यमय जमघट र आवतजावत भएको देखिएको छ । पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहको भिनाजु प्रसिद्ध विक्रम राणाको लाजिम्पाट स्थित निवासमा हिजो दिउँसो दुई बजे देखि पौने ५ वजेसम्म त्यस्तो रहस्यमय आवतजावत देखिएको हो ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको कान्छो मामाको उक्त घर पछिल्लो समय पूर्व युवराज्ञी हिमानीका भिनाजु प्रसिद्ध विक्रम राणाले भोगचलन गदै आएका छन् । उक्त घरमा जिउँसो दुई बजेपछि भारतीय दूतावासका प्रवत्ता अभिशेक दुवे र राजनीतिक डेस्कका प्रमुख भिप्रा पाण्डे गएका थिए । र उनीहरु त्याहा चार वजेसम्म नै बसेका थिए ।
सोही घरमा प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र मानिएका उद्योग राज्य मन्त्री मोती दुगढ पनि गएका थए । सवा चार नबज्दै राज्यमन्त्री दुगढ त्यहाँ पसेका पौने ६ बजे मात्रै वाहिरिएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका कटु आलोचक एवं प्रधानमन्त्री ओलीका अति प्रशंसक राज्यमन्त्री दुगढ र दूतावासका अधिकारीहरु त्यहाँ किन पुगेका थिए र घण्टौ सम्म को सँग के कुरा गरेर वसेका थिए भन्ने विषयमा रहस्यकै गर्भमा छ ।
यसै बिषयमा सुलसुले प्रतिनिधिले राज्यमन्त्री दुगढसँग प्रश्न गर्दा हिजो आफू त्यहाँ गएको स्वीकारेका छन् । उनले भने , ‘म त्यहाँ घर हेर्न गएको थिए । दलालले लगेको थियो , मन परेन फर्किएँ ’। कस्को घर रहेछ भन्ने थप प्रश्नमा , ‘उनले खै कुन्नी के नामको राणाको घर रहेछ ’ भनी आफूले नाम बिर्सिएको बताए । तर उक्त घर भाडामा वा बिक्रीमा नरहेको बुझिएको छ ।